लकडाउन : सुनसान पृथ्वी राजमार्गमा ! – Khabarhouse
लकडाउन : सुनसान पृथ्वी राजमार्गमा !
Khabar house | २७ चैत्र २०७६, बिहीबार १६:०४ | Comments
काठमाडौं । काठमाडौंको नागढुंगा देखि चितवनको मुग्लिङसम्मको पृथ्वी राजमार्ग सडक खण्डमा लकडाउनको पूर्ण पालना भएको पाइएको छ । राजधानी काठमाडौंमा दैनिक हजारौंको संख्यामा लकडाउन उलङ्घन गर्नेहरु प’क्राउ परि रहदा पृथ्वी राजमार्ग भने सुनसान देखिन्छ । सडकमा कुनैपनि सवारी साधन सञ्चालनमा आएका छैनन्।
त्यस्तै मानिसहरु पनि हिंडडुल गरेको देखिदैन् । सडकमा अत्यावस्यक सामग्री ढुवानी गर्ने साधनहरु बाहेक अन्य कुनैपनि साधानहरु देखिदैनन् । एलपी ग्यास बुलेट गाडीहरु फ्याट्टफुट्ट देख्न सकिन्छ । त्यस्तै खाद्यान्न, तरकारी बोकेका ढुवानीका साधनहरु सहजै सञ्चा लनमा आएका छन् । अत्यन्त व्यस्त रहने नौबिसे, धादिङ, मलेखु, लगायतका बजार सुनसान छन् । राजमार्गमा रहेका होटल व्यवसायहरु पूर्ण रुपमा बन्द छन् ।
यस्तै पसलहरु पनि बन्द छन् । सामाजिक दुरी कायम गर्दै प्रहरीले ठाउँठाउँमा सुरक्षा व्यवस्थालाई कडाई गरेको छ। सामान्य अवस्थामा निकै व्यस्त रहने मनकामना केबलकार पनि बन्द छ । लकडाउन सुरु भएदेखिनै केबलकार बन्द रहेको छ । निकै व्यस्त रहने मुग्लिङ बजार पनि पूर्ण रुपमा बन्द रहेको छ । मुग्लिनमा सञ्चालित कुनैपनि होटल पसल तथा बिभिन्न सेवा कार्यालयहरु खुुलेका छैनन् ।
राजमार्गमा ठाउँ ठाउँमा अस्थाई स्वास्थ्य शिविर स्थापना गरिएको छ । अत्यावस्यक सवारी साधन र ढुवानीका साधनमा यात्रा गर्ने व्यक्ति हरुलाई चेकजाँच गर्ने कार्यलाई प्रहरीले कडाई गरेको छ । मुग्लिङ देखि पोखरा जाने सडक खण्ड पनि सुनसान छ । तनहुँको डुम्रेमा पनि लकडाउनको पूर्ण पालना भएको देखिन्छ । सबै पसलहरु पूर्ण रुपमा ब’न्द भएका छन् । यस्तै अत्यावस्यक वस्तुहरु विक्री हुने पसल अगाडि समाजिक दुरी कायम गर्न लगाइएका चिन्हहरु देख्न सकिन्छ ।